Tiro aan caadi aheyn oo cabasho ka gudbisay adeegga boostada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bostaale ka socda Postnord oo bosto qaybinaya. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Tiro aan caadi aheyn oo cabasho ka gudbisay adeegga boostada
"Labo sanno iyo bar ayey dhibaato naga haysataa"
La daabacay fredag 18 augusti 2017 kl 12.37
Xagaagaan tiro saa'id ah ayaa cabasho u gudbiyey hey'adda Post- och telestyrelsen sababo la xiriira bostadii oo aan loo helin.
Sida ay shegtay Anette Jonsson oo ku nool deegaanka Rågsved iaydoo ay bosta qaybinta dhibaato ka haysatay waqti dheer:
-Labadii sanno iyo barkii ugu dambeeyey dhibaato ayaa naga haysatay. Waa arrin walaac iyo layaab leh. Waxaa ii carbuunan wargeys todobaadle ah balse ay dhif tahay in lay keeno. Xayeysiinta ay Postnord qaybiso isniin iyo Khamiis kasta waqti dheer ma aanan arag, ayey tiri Anette Jonsson.
Hey'adda Post- och telestyrelsen ayaa xagaagan waxaa soo gaaray cabashooyin saa'id ah oo la xiriira dad bostadii aan loo qaybin, cabshadaas oo ka soo yaartay qayb badan oo dalka ka mid ah.
Sida ay sheegtay Postnord oo ah shirkad laga leeyahay Sweden iyo Danmark bostada la waayey xagaagan waxaa u sabab ah dhanka shaqaalaha oo xilliga fasaxa ay dhibaato kala soo gudboonaatay. Erika Ahlqvist waa madaxa laanta qaybinta waraaqaha ee shirkadda Postnord:
-In aanan waraaqaha maalin kasta qaybin waxaa u sabab ah badanaa gabaabsi dhanka shaqaalaha oo malintaas taagan. Shaqaale badan oo xagaagan aan si ku meel-gaar u shaqaalaynay ayey dhici kartaa in ay ka boodaan marka shaqaalaha rasmiga ah uu jirada oo loo waco, ayuu yiri Erika Ahlqvist.
Laakiin in baaqashada qaybinta bostada ay tahay wax xagaagan ku kooban ma ahan wax ay ku raacsan tahay Anette Jonsson oo ku nool deegaanka Rågsved. Sida ay tiri dhibaatadan ayaa ah mid sannadyo badan soo jiitamaysay:
-Dhibaatadu waxay PostNord iga haysatay muddo ka badan labo sanno iyo bar. Mar kasta oo bostada waqti dheer iga maqnaato waxaan cabasho u gudbiyaa hey'adda Post- och telestyrelsen, ayey tiri Anette Jonsson.